Anyị "HERO igwe" ika bụ onye a ma ama na CHINA na mba ndị ọzọ.-Company News-Sunpai Industries Limited
MFR "M HR H “HERO” N’IME ỌMA N’IME CHINA na mba ndị ọzọ.
Oge: 2020-01-13 Hits: 6
Hero igwe bụ ọkachamara emeputa aku na-amịpụta & na-emepe emepe plastic igwe, dị ka Film ịfụ igwe, Plastic Bag Ndinam igwe, ebi akwụkwọ igwe, plastic imegharị ihe maka iji igwe, mbukota igwe wdg yana ọtụtụ afọ 'ahụmahụ nke ọkachamara arụmọrụ na ezi mgbe ọrụ, anyị A kwadoro HEROMACHINE dịka ngwaahịa ruru eru maka ọrụ gọọmentị na ọrụ nkeonwe na mba na mpaghara 100, dị ka Africa, Middle East, ndịda ọwụwa anyanwụ Asia, South America, Europe nwere ọnụ ọgụgụ dị ukwuu nke ndị ọrụ esenidụt.
Anyị setịpụla ebumnuche nke "imepụta ngwaahịa kachasị mma, guzobe akara kacha mma, rụọ njikwa kacha mma, na nzaghachi asọmpi ụwa niile".
Anyị ifịk ifịk imeghari uru nke anyị mba ogbo na dị elu usoro ka nnyocha na mmepe nke ọhụrụ ngwaahịa na mma nke usoro. Factorylọ ọrụ anyị dị na Ruian City. Ọ dị ihe dị ka kilomita 30 site na Wenzhou Airport, awa 3 site na ụgbọ oloko dị n'etiti Shanghai, ọkara elekere site na ụgbọ oloko n'etiti Yiwu.
Anyị nwere njikwa rụpụta mara mma yana sistemụ nyocha dị mma iji hụ na igwe ọ bụla zuru oke na mma. Anyị na-enye ọrụ nlekọta ma na-ele ndị ahịa anyị anya dị ka nnukwu akụ. Anyị dị njikere inye ọma na ozugbo tupu ahịa na mgbe ahịa ọrụ. You nwere ike ịtụkwasị obi na ngwaahịa anyị site na pasent zuru ezu.
Anyị ga-achọ ịkwado ndị enyi anyị ma zụlite ọnụ. Anyị na-ege ntị na anyị na-atụ anya gị ase na-akpali akpali nakwa dị ka nke ọma oru ngo na ị!
Nlekọta na-ekpo ọkụ site na ụlọ ọrụ Sunpai